Escape Waterfront ngamaplanga
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJeanne
Ikhaya elimangalisayo leWaterfront Katahdin log ekhaya. Ijonge echibini laseBalch kwindawo yabucala eyi-6+ acre yehlathi. Ukubaleka okugqibeleleyo, kunye nephedi yamaqhosha yokungena lula. Ukusinda okumangalisayo kuwo onke amaxesha ama-4, enendawo enkulu yomlilo yamatye, eboniswe kwindawo yokutyela i-gazebo, kunye nembono yechibi ukusuka kwidesika. Indlela okanye izinyuko ukuya kumda wamanzi kwi-350 ft yomgca wonxweme wabucala. 2 iindawo zomlilo zangaphandle. Idokhi + isihlenga esinokungena kwesanti enzulu yokuqubha, i-kayak, iphenyane, okanye isikhephe sokubhexa.
IPet Friendly xa uvunyiwe, nceda ubuze ngexesha lokubhukisha.
NGENXA YOKHUSELEKO lwe-COVID, IKHAYA LIHLALA LINGENA IINTSUKU EZI-2 PHAKATHI KWEENTENGISO!
Ikofu, iti, kunye netshokholethi eshushu.
Iphenyane elikhulu, isikhephe esibheqayo kunye ne-4 kayaks zikulindile emanzini.
Indawo ekwanti yokuqubha ngokukhuselekileyo, kunye nesihlenga.
phumla kwi-dock okanye kwi-patio yasemanzini
Iiloon zikho kakhulu echibini, kusenokwenzeka ukuba uzibone kwaye uzive zikhwaza
ukuloba okugqwesileyo (izixhobo azibonelelwanga)
Umngxuma wezihlangu zehashe engceni
Ibhola yeBocci, iYadi Yahtzee, kunye neseti yecroquet
2 Imingxuma yomlilo yangaphandle
ukutyibiliza, ukutyibiliza, okanye ukudlala kwichibi elinomkhenkce ebusika.
Indlela yenqwelo esuka kwi-driveway eya echibini yenza kube lula ukufikelela kumatshini wekhephu kumachibi angama-7 inkqubo yomzila wokuhamba ebusika.
Kukho iMarina eneendlela zikawonke-wonke, igesi kunye nevenkile elula. Ininzi indawo kwi-driveway yokucoca iithoyi zakho.
IZINTO EZIMELE UZENZE KWINDAWO EYINGQONGILEYO
(uluhlu olupheleleyo ngakumbi cofa kwindawo ethi "Bonisa Incwadi yesiKhokelo" ngezantsi)
Qhuba iindlela zelizwe
Ikhosi yeGalufa kwiPhondo laseLake (imingxuma eli-18)
Ukuvunwa kwamaqunube (25 imizuzu)
Ukuvunwa kwama-apile kwalapha
Iivenkile zakudala kunye nelizwe,
9 zidwelisiweyo ( 10-30 imiz)
Iinqwelo ze-White Lake Speedway kunye neGalufa encinci (imizuzu eyi-35)
Umtsalane waseNorth Conway umalunga neyure yonke
Ukhenketho lukaloliwe eNorth Conway (iyure enye)
Zisa iithoyi zakho ngqo echibini ukusuka kwindlela yokungena. I-Balch ikumachibi asixhenxe eendlela ezihambayo zekhephu, kwaye inxibelelana nezinye iindlela ezininzi ezibukekayo, iidolophu kunye neendawo zokutyela.
Ukutyibiliza, ukuhamba, i-snowshoe okanye ukutyibiliza kwilizwe elinqumlayo kanye echibini, ngokuxhomekeke kumkhenkce kunye neemeko zekhephu.
Indawo yaseAbernaki Ski . (30 imiz)
Indawo ye-King Pine Ski (40 min)
Qhoboshela indawo ye-ski (4 imiz)
Gunstock ski resort (1hr.) Alpine coaster, nordic and alpine skiing, snowshoeing kunye nerenti yebhayisekile enamafutha.
IMount Cranmore Ski Resort (iyure enye)
I-Kahuna Laguna Indoor Water Park (iyure enye)
Iivenkile ezihlaza zaseSettlers (1hr)
iitoni zeevenkile zakudala zasekhaya kunye nelizwe.
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1
Eli khaya likwindawo yasemaphandleni eyi-6 acre. Indawo eyimfihlo kakhulu eyimfihlo enehlathi elininzi kunye nonxweme lokuhlola. Ebusika, iinqwelo-mafutha zekhephu zinokufikelela ngokuthe ngqo echibini nakwiinkqubo zomzila. Kukho ivenkile eluncedo ngaphakathi kwi-5 min drive. Kwakhona igrosari enkulu kwimizuzu eli-15. Zama enye yeendawo zokutyela ezininzi ezikufutshane kuquka isitayile sosapho okanye isidlo sakudala.
Uninzi oluninzi olulungileyo lutya kwindawo. (cofa "bonisa incwadi yesikhokelo" ngezantsi)
Umbuki zindwendwe ngu- Jeanne
Lives in Rural MA, loves the outdoors
Akukho kwisiza, kodwa uMnini ufumaneka ngokubhaliweyo 24/7 ngalo naluphi na uncedo olufunekayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Acton